Immunoglobulin (ihe mgbochi), bụ mkpụrụ ndụ glycoprotein nke mkpụrụ ndụ ọbara na-emepụta. Ihe mgbochi Immunoglobulins na-arụ ọrụ dị mkpa na ịchọpụta na ịrapara na ụfọdụ ọgwụ nje dịka nje na nje. Ọgwụ ndị a na-enye aka na mbibi nke ọgwụ ndị ahụ. Ya mere, ha na-etolite akụrụngwa mmeghachi omume nke ihe mgbochi.
Enwere ụdị Immunoglobulin ise dị mkpa na anụmanụ na-enwe placental, dabere na amino acid usoro mgbanwe gosipụtara na mpaghara otu olu dị ogologo oge niile. Ha gụnyere IgA, IgD, IgE, IgG yana ọgwụ mgbochi IgM. Eachdị ụdị ọgwụ mgbochi ndị a dị iche iche nwere otu arụmọrụ dị iche, yabụ ya na arụmọrụ pụrụ iche na mmeghachi nke antigens
Ọbara IgA dị n’ebe dịkarịsịrị ala ebe ara na-ahụ ihe ndị dị na mba ọzọ. Mpaghara ndị a gụnyere imi, ụzọ ikuku, eriri afọ, ikpu, ntị, yana elu anya. osọ, anya mmiri, na ọbara nwekwara ọgwụ IgA
N’aka nke ọzọ, ọgwụ mgbochi IgG dị na mmiri ọbụla. A na-ahụ ọgwụ mgbochi IgM naanị na ọbara na mmiri lymph.
Ihe ndị na-egbochi IgE dị n’ime akpa ume, anụ ahụ, yana akpụkpọ ahụ mucous. N’ikpeazụ, a na-ahụ ọgwụ mgbochi IgD n’ime afọ na akwara obi.
N'ebe a, anyị ga-elekwasị anya na IgG.
Gini bu Immunoglobulin G (IgG)?
Immunoglobulin G (IgG) bụ onye ncheta; ụdị mgbochi dị mfe nyị na ọbara nke mmadụ. Na mgbakwunye, na-aza maka 75% nke immunoglobulin niile dị na ahụ mmadụ, ọ bụ ụdị immunoglobulin kachasị n'ime mmadụ.
Mkpụrụ ndụ ọbara ọcha na-ahapụ ọgwụ mgbochi IgG n'ụdị nzaghachi ọgwụ mgbochi nke abụọ maka ịlụ ọgụ antigens. N'ihi ịdị adị ya n'ahụ mmadụ na akụrụngwa dị egwu, IgG abawo uru dị ukwuu n'ọmụmụ ihe mgbochi yana yana nyocha sayensị. A na-eji ya dị ka ọkọlọtọ mgbochi na mpaghara abụọ.
Na mkpokọta, IgG bụ glycoproteins, nke ọ bụla nwere ụdọ polypeptide anọ nwere ụdị abụọ nke ụdị polypeptide abụọ ọ bụla. Twodị polypeptide abụọ ahụ bụ ọkụ (L) na arọ, gamma (γ). Ejikọtara ejikọtara ọnụ site na agbụ ma ọ bụ ike agha.
Ọdịiche dị n'etiti ụmụ irighiri immunoglobulin G na-abịa n'ụkpụrụ nke amino acid usoro ha. Agbanyeghị, n'ime sel IgG ọ bụla, agbụ agbụ abụọ bụ enweghị mmasị, otu ihe ahụ na ụdọ H.
Isi ọrụ moti IgG bụ imepụta ọgba aghara n’etiti ihe ndị na-eme ka ahụ mmadụ na ọgwụ na-egbochi ihe.
Kedu ụdị klọọkụ abụọ dị Immunoglobulin G (IgG) nwere?
Immunoglobulin G (IgG) nwere nkebere subclass anọ dị iche na usoro nke disclaide bond number yana mgbakwunye mpaghara na ngbanwe. Igwe okwu abụọ a gụnyere IgG 1, IgG 2, IgG 3 na IgG 4.
IgG1 ihe ruru 60 ka 65% nke IgG isi niile. N'ikwu ya, ọ bụ sọsọ dịkarịsịrị mmadụ n'ime ọbara. N'ụzọ dị mkpa, klas immunoglobulin a bara ụba na ọgwụ mgbochi ndị na-enyere aka ịlụ ọgụ megide protein na antigens polypeptide na-emerụ ahụ. Ihe atụ nke protein nile IgG 1 na-egbochi bụ diphtheria, nsí na nje bacteria tetanus na protein nje.
Newmụ amụrụ ọhụrụ nwere ọ̀tụ̀tụ̀ IgG1 na-agaghịzi agwọta ya. Ọ bụ n'oge a ka dị obere ka nzaghachi ahụ ruru ihe nlebara anya ya. Ma ọ bụghị ya, ịghara itinye uche ya na ọkwa ahụ bụ ihe na-egosi na nwatakịrị ahụ nwere ike ịta ahụhụ hypogammaglobulinemia, ọrịa na-alụso ọrịa ọgụ na-eme n'ihi ọkwa ezughi oke nke ụdị gamma globulin niile.
immunoglobulin g subclass 2 na-abịa nke abụọ na usoro nke ihe kachasị adịkarị na situm mmadụ. Ọ dị ihe dị ka 20 ruo 25% nke Immunoglobulin G. Ọrụ nke immunoglobulin g subclass 2 bụ iji nyere usoro ahụ ji alụso ọgụ ọgụ megide antigens polysaccharide dị ka Ike ka oyi baa or Haemophilus influenzae.
Nwatakịrị na-enwetara mkpokọta akwụkwọ ọgwụ immunoglobulin gụrụ nke abụọ mgbe ọ gbara afọ isii ma ọ bụ asaa. Egosiputa IgG2 bu ihe ndi mmadu na - ebute oria iku ume ugboro ugboro.
N'otu aka ahụ, na IgG 1, Immunoglobulin G isotopes nke Subclass IgG3 bara ụba na mgbochi. Ọgwụ ndị a na-enyere aka ịzaghachi ihe mgbochi ahụ iji merie protein na-emebi ihe na polypeptide antigens n'ime ahụ mmadụ.
5% ruo 10% nke ngụkọta IgG na ahụ mmadụ bụ ụdị IgG3. Agbanyeghị, n'agbanyeghị na ha adịchaghị mkpa ma e jiri ha tụnyere IgG1, mgbe ụfọdụ IgG3 nwere mmekọrịta dị elu.
Onu ogugu IgG 4 nke IgG agbako zuru oke karia 4%. Ọ dịkwa uru ịmara na Subclass nke Immunoglobulin G a dị na ọkwa dị oke ala n'etiti ụmụaka na-erubeghị afọ 10. Ya mere, nchọpụta nke immunoglobulin g subclass 4 erughi naanị ike ga-ekwe omume maka ụmụaka dịkarịa ala afọ iri na ndị okenye .
Agbanyeghị, ndị ọkà mmụta sayensị enwebeghị ike ịkọwa ọrụ ọrụ immunoglobulin g subclass nke ọma 4. Na mbido, ndị sayensị gosipụtara ụkọ IgG4 na nsogbu nri.
Ka o sina dị, nnyocha e mere n’oge na-adịbeghị anya gosiri na ndị ọrịa nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo, pneumonia ma ọ bụ cholangitis nwere ọkwa IgG4 dị elu. Yabụ, nyocha nyocha emeela ka mgbagwoju anya banyere ọrụ dị immunoglobulin g subclass 4.
Immunoglobulins na-ekerịta otu subclass ahụ nwere ihe dịka 90% yiri nke njikọ chikọlo, na-atụleghị mpaghara mgbanwe ha N’aka nke ọzọ, ndị nke dị n'okpuru sọks dị iche iche na -emekọrịta naanị 60% myirịta. Mana n’ozuzu, ọkwa ịta ahụhụ niile IgG Subclasses n’agbanwe n’afọ.
Immunoglobulin G (Igg) Ọrụ na Uru
Ihe mgbochi IgG na-arụ ọrụ dị mkpa na nzaghachi mgbochi nke abụọ dịka IgM antibody na-elekọta mmeghachi omume mbụ. Kpamkpam, immunoglobulin g antibody na-ejide ọrịa na nsị anụ ahụ gị site na ijikọ nje ndị dịka nje, nje na nje.
Ọ bụ ezie na ọ bụ obere ọgwụ na-egbu egbu, ọ bụ ihe kachasị n'ụba anụ ahụ mammal, gụnyere nke mmadụ. ọ bụ ihe dịka 80% nke ọgwụ mgbochi niile dị n'ahụ ahụ.
N'ihi nhazi ya dị mfe, IgG nwere ike ịbanye na Plasenta mmadụ. N'ezie, ọ dịghị klas Ig ọzọ nwere ike ime nke a, n'ihi ntọala ha dị mgbagwoju anya. Ya mere, ọ na arụ ọrụ dị oke mkpa na ichebe nwa amụrụ ọhụrụ n’ime ọnwa izizi nke ịtụrụ ime. Nke a bụ otu n'ime uru immunoglobulin g bara uru.
IgG ụmụ irighiri ihe na-emeghachi na ndị nabatara Fcγ ndị dị ugbu a na mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ sel na-egbu egbu ma na-eme ka ha ghara ịdị ike. E wezụga nke ahụ, ụmụ irighiri akwara nwere ike ịkwalite sistemu.
Usoro mgbakwunye bụ akụkụ nke sistem na-alụso ọrịa ọgụ yana oke ọrụ ya bụ ịkwalite ikike nwoke na nwanyị na phagocytic sel iji wepu ụmụ nje na mkpụrụ ndụ merụrụ ahụ site na ahụ mmadụ. Usoro ahụ na - eme ka ikike nke mgbochi na sel iji mebie mkpụrụ ndụ nke ọrịa ma na - amata ha. Nke a bụ uru nke immunoglobulin g.
Ahụ gị na - emepụta ọgwụ mgbochi immunoglobulin g na oge na - egbu oge iji gbochie ọrịa. Ahụ nwere ike idobe ọgwụ a maka ogologo oge iji nyere aka ọ bụghị naanị ịlụ ọgụ na-akpata ọrịa kamakwa ịkwado iwepụ ndị ahụ mebiri emebi na sistemụ gị.
N'ihi ntinye ntuli aka dị elu, IgG bụ ọgwụ mgbochi kachasị dị mma maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa n'efe. N'ihi ya, IgG bụ ihe kachasị egosi na inwere ọrịa ma ọ bụ ọgwụ mgbochi na nso nso a.
IgG ntụ ntụ na-eji
IgG ntụ ntụ bụ mgbakwunye nri a nụchara anụcha nke na-arụ ọrụ dị ka nnukwu immunoglobulin G (IgG). Ọ na - enye IgG kachasị mkpa iji nyere ahụ gị aka ị nweta nzaghachi mgbochi siri ike, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na - enwe nsogbu na - akpata nsogbu ugboro ugboro.
Otu ihe di nkpa na IgG Powder bu bovine colostrum nke n’eme ka uzo immunoglobulins si puta. Immunoglobulins ndị a bụ kpọmkwem maka ọgwụ mgbochi mmadụ dị iche iche, gụnyere Immunoglobulin G (IgG). Ya mere, immunoglobulin g colostrum bụ ụzọ dị irè maka ịkwalite ọgụ ahụ mmadụ iji lụsoo ọrịa ọgụ.
Na immunoglobulin g colostrum dị ka nnukwu ihe mejupụtara ya, IgG Powder nwere ike inye ihe ruru 2,000 mg nke IgG n'otu ọrụ. Ntụ ntụ ahụ ga-enyekwa ahụ gị protein (4 g kwa na-enye gị nri)
Karịsịa, a nwalewo immunoglobulin g colostrum na ntụ ntụ ma gosipụta na ọ ga-enyere ndị mmadụ aka ịnọgide na-alụso ọrịa ọgụ eriri afọ. Ọ na - emezu nke a site na ijikọ ụmụ irighiri nje na nsị dị n'ime gut lumen.
Ya mere, uru immunoglobulin g gụnyere:
Mgbanwe modul mma
Ihe mgbochi siri ike na-egbochi mgbochi (GI)
Ijikwa mmezi ahụkarị
Nkwado ahụike ahụike nke amụrụ ọhụrụ
Nleba anya mgbochi Mucosal, maka ọkọnọ Immunoglobulin na - abụghị allergenic
Microbial mmezi mmezi
Iji atụ aro iji
Onwebeghi ogwu IgG ntụ ntụ eji eme sayensị iji gosipụta na ọ kacha mma. Agbanyeghị, ndị ọkachamara ahụike na-atụ aro na otu ma ọ bụ otutu scoops ntụ ntụ kwa ụbọchị dị mma. Tinye IgG ntụ ntụ na ounce mmiri 4 / ihe ọ yourụ favoriteụ kachasị masị gị ma ọ bụ nke dọkịta gị gwara gị.
Enweghị ike Immunoglobulin G (Igg)
An Immunoglobulin G (IgG) erughi ya na-ezo aka na ọnọdụ ahụike mara njiri na-ezighi emepụta Immunoglobulin G. Ọ bụrụ na mmadụ nwere IgG erughi eru, ọ nọ n’ihe ize ndụ ka ọ nke ibute ọrịa n’ihi na usoro ahụ ha ji alụso ọrịa ọgụ adịghị ike.
Ọ bụ ihe nwute, ụkọ immunoglobulin g nwere ike imetụta gị n’oge ọ bụla na ndụ gị, ọ nweghị ọgbọ ịpụghị na ọnọdụ a.
Onweghi onye jisiri ike mata ihe kpatara ọnwụ immunoglobulin. Na agbanyeghị, a na-enyo enyo na ọ bụ ihe metụtara mkpụrụ ndụ ihe nketa. Ọzọkwa, ndị ọkachamara n'ịgwọ ahụike kwenyere na enwere ọgwụ na ọnọdụ ọgwụ nwere ike ibute ụkọ IgG.
Nchoputa nke enweghi nsogbu immunoglobulin g bido site n’inyocha nnwale iji mata ogo immunoglobulin. A na - eme nyocha ndị ọzọ dị mgbagwoju anya na - emetụta ihe gbasara ọgwụ mgbochi mmadụ iji mata ihe nzaghachi nke anụ ahụ yana ịgba ọgwụ mgbochi ndị mmadụ na - enyocha onye nwere ọnọdụ ahụ.
Ọrịa Symmunoglobulin G Enweghị nsogbu
Onye nwere ụkọ immunoglobulin g yikarịrị ka egosiputa ihe mgbaàmà ndị a:
Ọrịa na-efe efe dịka ọrịa sinus
Usoro nri na -ari nri
Ọrịa na-akpata akpịrị mgbu
siri ike ma na enwere ike ibute ọrịa na egbu egbu (na obere oge n'agbanyeghị)
N'ọnọdụ ụfọdụ, ọrịa ndị dị n'elu nwere ike igbochi ọrụ ọrụ ikuku na ngụgụ. N'ihi ya, ndị ọ metụtara na-enwe nsogbu iku ume.
Isi ihe ọzọ ị ga - ekwupụta banyere ọrịa ndị a nke IgG na - ebute bụ na ha nwere ike ịwakpo ọbụlagodi ndị gbara ọgwụ nje na mmiri oyi.
Kedụ ka esi gwọọ ụkọ IgG?
Usoro ọgwụgwọ erughi IgG nwere ụzọ dị iche iche, nke ọ bụla dabere n'ịdị ogo nke ihe mgbaàmà na ọrịa. Ọ bụrụ na mgbaàmà ndị ahụ dị nro, nke pụtara na ha na-egbochi gị ka ị na-arụ ọrụ / ọrụ gị oge niile, ọgwụgwọ ozugbo nwere ike zuru ezu.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọrịa a siri ike ma na-agakarị, ọgwụgwọ na-aga n’ihu nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mma. Usoro ọgwụgwọ a nwere ogologo oge nwere ike ịgụnye ọgwụ nje kwa ụbọchị iji lụsoo ọrịa ahụ.
N'ọnọdụ siri ike, ọgwụ immunoglobulin nwere ike ịbịa.
Usoro ọgwụgwọ ahụ na-enyere aka ịkwalite usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, si otú a na-enyere ahụ aka ịlụ ọgụ nke ọrịa ka mma. Ọ gụnyere itinye ngwakọta ọgwụ mgbochi ọgwụ (immunoglobulins) ma ọ bụ ihe ngwọta nke anụahụ onye ọrịa, banye na akwara ma ọ bụ na akwara ya.
Ojiji iji IgG ntụ ntụ nwekwara ike ịhụ onye gbakere na erughi IgG.
Immunoglobulin G Side Mmetụta
Mgbe ọgwụgwọ immunoglobulin gasịrị, ahụ gị nwere ike ịmeghachi immunoglobulin g.
Ọrịa ndị a na-ahụkarị immunoglobulin g gụnyere:
Ike adịghị n’ahụ
Mgbu na ntụtụ ebe
Ihe mmetụta immunoglobulin g na-ebute gụnyere:
Ihe isi ike iku ume
Mgbe immunoglobulin igG dị oke
Oke dị elu IgG ọkwa nwere ike ịhụ na systemic lupus erythematosus, atrophic portin vein, cirrhosis, hepatitis na-arụ ọrụ na-adịghị ala ala, ọrịa ogbu na nkwonkwo, endocarditis nje bacteria na-akpata, otutu myeloma, lymphoma na-abụghị Hodgkin, ịba ọcha n'anya, ọrịa nrịanrịa, na mononucleosis.
Enwere ike ịhụ ọkwa IgG nke immunoglobulin dị elu na IgG-, ụfọdụ ọrịa nje (dịka nje HIV na cytomegalovirus), nsogbu mkpụrụ ndụ plasma, IgG monoclonal gamma globulin ọrịa na ọrịa imeju.
Mgbe immunoglobulin igG dị obere
immunoglobulin g dị ala na-etinye mmadụ n'ihe egwu dị elu nke ibute ọrịa ugboro ugboro. Enwere ike ịhụ ọkwa immunoglobulin g dị ala na nkwarụ na-efe efe, ọrịa immunodeficiency syndrome, na-abụghị IgG otutu myeloma, ọrịa yinye siri ike, ọrịa njiri ọkụ ma ọ bụ ọrịa nephrotic.
Ọgwụ dị oke ala nke ihe mgbochi ahụ nwekwara ike ịbụ ọkwa ụfọdụ n'ụkpụrụ leukemia, mmerụ ahụ dị oke egwu, ụkwara ume ọkụ, ọrịa akụrụ, sepsis, erighị nri, pemphigus, tonic musical na ọrịa erighị ihe na-edozi ahụ.
Mgbe immunoglobulin IgG dị mma
Ọ bụrụ na ndị immunoglobulin IgG dị mma maka ọgwụ nje dị ka Covid-19 ma ọ bụ dengue, ọ bụ ihe na-egosi na onye nọ n’ule ahụ nwere ike bute nje metụtara ya n’ime izu ndị na-adịbeghị anya. Ọzọkwa, immunoglobulin g nti utịp gosipụtara na ọ ga-ekwe omume na onye ahụ nwetara ọgwụ mgbochi na nso nso a iji kpuchido ha pụọ ​​na nje ahụ.
Ya mere, ezigbo nti immunoglobulin bụ ihe ngosipụta nke ịbawanye n'ihe mmadụ nwere ibute ọrịa metụtara nje a na-enye aka na nyocha dị mma. Nke a bụ ọkachasị ma ọ bụrụ na nsonaazụ dị mma esiteghị na ọgwụ mgbochi.
Gịnị mere Is Immunoglobulin G (Igg) Enweghị ntụpọ Na Ọrụ Ndụ?
Immunoglobulin G (IgG) dị mkpa na ọrụ ndụ n'ihi na ọ na-arụ ọrụ kachasị mkpa iji mee ka ndị mmadụ nwee ahụike ma nwee ike ịga n'ihu na ndụ ha dị ka ihe ndị ọzọ bụ Immunoglobulins.
Dika odi, ihe anakpo ogwu IgG no na arua nile, sịnye anya mmiri, mmamiri, obara, ipu nwanyi na ihe ndi ozo. N'iburu n'uche nke a, ọ bụghị ihe ijuanya na ha bụ ọgwụ mgbochi ọrịa kachasị, na-aza 75% ka 80% nke ọnya ọgwụ niile dị na ahụ mmadụ.
Ọgwụ nje na-echebe akụkụ ahụ / akụkụ nke na-emetụta mmiri ndị a site na nje na nje na-efe efe. Yabụ, na-enweghị ma ọ bụ na-ezughi oke igwe nke IgG, ịnwere ike ịgaghị ịga ọmụmụ ihe ụbọchị ndụ gị nke ọma n'ihi ọrịa na-arịakarị.
Ozokwa, IgG di nkpa maka nmeghari mmadu. N’ịbụ onye kachasị ntakịrị n’ime ọgwụ mgbochi ọrịa niile ma nwee usoro dị mfe, ọ bụ naanị ọgwụ nwere ike ịbanye na Plasenta n’ime nwanyị dị ime. Yabụ, ọ bụ naanị ọgwụ ga - egbochi nwa e bu n'afọ na nje na nje. Na-enweghị ya, ọtụtụ ụmụaka e bu n'afọ ga-anọ n'ihe ize ndụ dị elu nke ibute ọnọdụ ahụike dị iche iche, ụfọdụ n'ime ha nwere ike itinye ndụ n'ihe egwu.
Is Enwere mmekọrịta ọ bụla n'etiti Immunoglobulin G Na Lactoferrin?
Ma immunoglobulin G na lactoferrin bụ ihe abụọ dị mkpa sitere na mmiri ara ehi (site na ụmụ mmadụ na ehi). Dị ka immunoglobulin G, ọmụmụ na-egosi na lactoferrin na-etinyekwa aka na ọrụ nchebe dị iche iche na ahụ mmadụ.
Ọ na-enyere ahụ aka ịlụ ọgụ microorganisms dịka nje, nje, yana ọrịa fungal. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ na-akwalite ọrụ nke ahụ mmadụ na-egbochi. Yabụ, nri lactoferrin nwere ike ịgbakwunye ọgwụ immunoglobulin G ntụ na ọrụ a.
Agbanyeghị, lactoferrin nwere ọrụ ndị ọzọ; na-ejikọ ígwè na njem.
Ọzọ Ihe omuma banyere Immunoglobulins
Mgbe ole iji nwalee immunoglobulins?
N'oge ụfọdụ, dọkịta gị nwere ike ikwu ka ị gaa ule immunoglobulin, ọkachasị nke ọ na-enyo enyo na ị nwere ogo immunoglobulin dị ala ma ọ bụ nke ukwuu. Nyocha a bụ iji gosipụta ọkwa (nha) nke immunoglobulin dị n'ahụ gị.
Ukwuu, an nnwale immunoglobulin ka akwadoro ma oburu na inwere:
Ọrịa na-egbu oge, ọkachasị sinus, ngụgụ, afọ, ma ọ bụ eriri afọ
Ọrịa afọ na-adịghị ala ala / afọ ọsịsa
Ibelata oke ihe omimi
Ọ bụ ihe omimi
oke nfụkasị mmeghachi omume
Akụkọ banyere mgbochi nke ezinaụlọ
Dọkịta gị nwekwara ike ịchọpụta na ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịkwado ule immunoglobulin maka gị ma ọ bụrụ na ị dara ọrịa mgbe ịgasịrị njem.
A na-eji nnwale ọbara immunoglobulins nyere aka na nyocha nke ọnọdụ ahụike dị iche iche dịka:
Nje na nje na nje
Enweghi ike: Nke a bụ ọnọdụ ejiri arụ ọrụ nke ahụ mmadụ belata iji buso ọrịa na ọrịa ọgụ
Ọrịa autoimmune dịka ọrịa ogbu na nkwonkwo na ụkwara
oria cancer dika otutu myeloma
Nwa amụrụ ọhụrụ na-efe efe
Kedu otu esi eme ule ahụ?
Nnwale a na-agụnyekarị ịlele ụdị atọ kachasị immunoglobulin; IgA, IgG, na IgM. A na-atụkọta atọ ndị a ọnụ iji nye dọkịta gị foto nke mmetụta nzaghachi ọrịa gị.
Nyocha ọbara gị ga-abụ ụdị maka nnwale a. Yabụ, onye nyocha ụlọ nyocha ga-abanye n'ime agịga n'ime ngalaba nke ogwe aka gị iji rute otu n'ime eriri afọ. Mgbe ahụ, onye na-ahụ maka nkà na ụzụ na-ahapụ ọbara ka ọ na-anakọta n'ime tube ma ọ bụ vial na agịga.
N'aka nke ọzọ, dọkịta nwere ike ịhọrọ iji usoro nke homonụ ọbara (CSF) kama ịnara ọbara maka nyocha ahụ. Maka ịkọwapụta, mmiri akụkụ ụbụrụ (cerebrospinal fluid) bụ mmiri mmiri gbara ya gburugburu n’ọkpụkpụ azụ na ụbụrụ. Onye na-ahụ maka ọrụ gị ga-eji usoro akpọrọ lumbar puncture wepụ mmiri dị n’ọkpụkpụ gị.
Iwepu mmamiri nke mmiri puru ibu ihe nwute. Ka osi di, ndi okacha mara aka na udiri udiri anwa ime obodo ahu iji mee ka aru ndi ahu metutara ghara idi ngbu. Yabụ, ihe mbụ onye na-eme ụlọ nyocha gị ga-eme bụ ịgbanye ogbugba ọgwụ na-eme ka ọgwụ kụnwụọ n’akụkụ azụ gị iji mee ka mgbu niile belata.
Mgbe ahụ, onye ọkachamara nyocha ụlọ ọrụ ga-agwa gị ka ị dinaa n'akụkụ gị na tebụl wee welite ikpere gị n'ule gị. N'aka nke ọzọ, enwere ike ịgwa gị ka ị nọrọ ọdụ na tebụl. Mgbe ị nọ na ọnọdụ abụọ ahụ, teknụzụ ga-enwe ike ịchọta vertebrae obere ala gị abụọ.
Ihe na - esote ya bụ na onye na - ahụ maka ọrụ ahụ ga - etinye agịga dị warara n'etiti etiti gị nke atọ na nke lumbar vertebrae. Mgbe ahụ, obere mkpụrụ nke ụbụrụ gị ga - agbakọta n'ime agịga oghere. Mgbe sekọnd ole na ole gachara, ọ ga-eji aka ya wepụta mkpụmkpụ ya na mmiri a anakọtara na ya.
N'ikpeazụ, a ga-etinye ihe ngosipụta mmiri n'ime ngwa nchọpụta ihe immunoglobulin akọwapụtara maka nnwale.
Immunoglobulin G (IgG) so n’ime immunoglobulins ndị ọzọ dị mkpa n’ahụ mmadụ. Ndị ọzọ bụ IgA, IgD, IgE, yana IgM. Agbanyeghị, n'ime ụdị immunoglobulins anọ, IgG bụ obere mana ihe kachasị na ahụ dị mkpa na ahụ. Ọ dị ugbu a na mmiri ahụ ọ bụla iji kwado usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ n'ọgụ megide nje (nje na nje).
Oke immunoglobulin G dị ala ma ọ bụ nke dị elu maka ahụike gị. N'ihe banyere erughi immunoglobulin g, ihe IgG ntụ ntụ zụrụ iji ya nwere ike ịbụ nzọụkwụ nke mgbake gị.
Saadoun, S., Mmiri, P., Bell, BA, Vincent, A., Verkman, AS, & Papadopoulos, MC (2010). Ọkpụkpụ intra-cerebral nke neuromyelitis optica immunoglobulin G na mmezu mmadụ na-arụpụta ọnya neuromyelitis optica na ụmụ oke. Brain, 133(2), 349-361.
Marignier, R., Nicolle, A., Watrin, C., Touret, M., Cavagna, S., Varrin-Doyer, M.,… & Giraudon, P. (2010). Oligodendrocytes mebiri site na mmerụ ahụ neuromyelitis optica immunoglobulin G. Brain, 133(9), 2578-2591.
Berger, M., Murphy, E., Riley, P., & Bergman, GE (2010). Ntozu ogo ndu, onodu immunoglobulin G, na onu ogugu n’ile ndi oria bu oria immunodeficiency basrament n’oge eji aru oru onwe ha na immunoglobulin G. Akwukwo ogwu banyere ogwu, 103(9), 856-863.
Radosevich, M., & Burnouf, T. (2010). Immunoglobulin intravenia G: usoro dị iche iche na usoro mmepụta, njikwa mma na mmesi obi ike. Vox sanguinis, 98(1), 12-28.
Fehlings, MG, & Nguyen, DH (2010). Immunoglobulin G: ọgwụgwọ nwere ike ime ka ọnụnọ neuroinflammation na-eso mmerụ akwara azụ. Journal nke ọgwụ immunology, 30(1), 109-112.
Bereli, N., Şener, G., Altıntaş, EB, Yavuz, H., & Denizli, A. (2010). Poly (glycidyl methacrylate) beads agbakwunyere cryogels maka pseudo-kpọmkwem nwere njikọ mkpụkọ nke albumin na immunoglobulin G. Ihe Sayensi na Injinịa: C, 30(2), 323-329.